ukukhanyisa | Eyekhala 2022
Isikhokelo kwizinto ezilungileyo nezingalunganga zezibane ze-LED ezineentlobo ezahlukeneyo zeebhalbhu kunye nobushushu bombala. Jonga ukuba ngaba iibhalbhu zokukhanya ze-LED zilungele uyilo lwakho.
Iindidi zezibane zelayili (Isikhokelo soYilo lokugqibela)
Iindidi zezibane zesilingi isikhokelo sokuyila kubandakanya izinto ezithandwayo, izitayile kunye nolungelelwaniso oluphambili kuyilo lwakho lwangaphakathi.
Ukhanyisa njani iGumbi lokuPhila ngaphandle kokuKhanya okungaphezulu
Iingcebiso malunga nendlela yokukhanyisa igumbi lokuhlala ngaphandle kwesibane esingaphezulu. Bona iintlobo zezibane kunye nokulungiswa kunye namagumbi okuhlala ukukhanya kwendalo.
Izimvo eziHleliweyo zeGumbi lokuHlala
Igalari yamagumbi okuhlala amahle e-chandelier kubandakanya imveli, uyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje. Jonga iigumbi lokuhlala kubandakanya igumbi lokuhombisa ..
Izibane zeMason Jar ezijingayo (ii-DIY kunye neeMbono zoLungiselelo)
Izibane zeMason ezixhonywe ngezibane ze-DIY kunye nezibane ekhitshini, kwigumbi lokuhlambela kwigumbi lokulala kunye nepatio. Fumana izibane zejasi ezixhonywe ekhayeni lakho.
Iindidi zezixhobo zokukhanyisa (Isikhokelo soYilo)
Iindidi zezixhobo zokukhanyisa kubandakanya ezona mpawu zibalaseleyo kunye nemibono yesitayile yoyilo. Fumanisa ukuba unokukhetha njani ukukhanya okufanelekileyo kuyilo lwakho lwangaphakathi nangaphandle.
Isikhokelo sokuyila ekhitshini phantsi kwesibane sekhabhinethi kubandakanya iintlobo ezithandwayo, indleko kunye nemveliso. Fumana olona hlobo lubalaseleyo lwezibane zekhabhathi oza kuzisebenzisa ekhitshini lakho.
Izibane ezigqibeleleyo zokuFunda ebusuku
Isikhokelo kwezibane zibalaseleyo zokufunda ebusuku ukuba loluphi uhlobo lokukhanya kombala oza kulusebenzisa. Jonga iipokethi eziphezulu zezibane zokufunda ebusuku.
Iingcamango ezi-10 eziphezulu zeDrum eziKhanyayo zokuKhanyisa
Wamkelekile kwigalari yethu yezikhanyisi ezi-10 eziphezulu zegubu ekhitshini, kumagumbi okutyela nakwigumbi lokulala. Yiba nombono wokuba yeyiphi indawo yokuhlala yobungcali abayili bayo abakhetha njengokhetho lwabo oluphezulu lwe-10 lokukhanya kwesandi. Izibane ezixhonyiweyo zinokutshintsha kakhulu ukuziva ...
Iimpawu ezimangalisayo ezili-10 zeGlobe zaMhlanje
Bona ezona ndidi zeglobhu zangoku zinika isitayile segumbi lakho kunye nobuhle. Jonga iiglavu ezidumileyo zehlabathi kubandakanya iinkuni, isinyithi esimnyama, iglasi kunye ..
Amanqaku aphezulu aphezulu angama-10
Ukukhetha okuphezulu kwe-chandelier yomgangatho wangoku we-10 ekhaya. Bona ezona chandelier zala magumbi okutyela, ikhitshi, igumbi lokulala, okanye ikhabethe ukongeza isitayile kunye nobuhle
izihlangu zomtshato wentombazana
l emile kwisiqithi sasekhitshini
indlela yokubopha i-windsor epheleleyo
Uhlaziyo lwemitshato yeenwele ezimfutshane
Umtshato kaMichelle kunye no-barack obama